Dalal Ku Yaalla Qaarada Afrika Oo Maanta Laga Ciidayo – somalilandtoday.com
Dalal Ku Yaalla Qaarada Afrika Oo Maanta Laga Ciidayo
(SLT- Senegal)-Dalal ku yaalla Galbeedka qaarada Afrika ayaa waxaa Maanta laga ciidayaa oo ay u tahay maalinta Koowaad ee Ciidul fitriga, iyadoo dunida Muslimka laga wada sooman yahay, kadib markii bisha soonfur laga waayey.
Dalalka laga Ciidayo ayaa waxaa kamid ah Senegal, Mali, Niger iyo Ivory Coast, waxaana ay sheegeen in xalay bisha soonfur laga arkay dalalkooda, sidaasina ay ugu dhawaaqeen Ciida.
Dhinaca kale waxaa Maanta oo Arbaca ah laga ciidayaa deegaanada ay maamulaan dagaalamayaasha Al-shabaab oo shaaciyay in maqribnimadii xalay bisha laga arkay deegaano ka tirsan Gobolada dalka ay gacanta ku hayaan.
Saaka waxaa laga tukaday saalada Ciida deegaanada Al-shabaab, isla markaana dadweyne badan isugu geeyay goobo fagaare ah, xili dowladda Federaalka iyo maamulada kale ee dalka ay sheegeen in Maanta la dhammeystirayo 30-ka Ramadaan.
Inta badan dalalka Caalamka ayaa ku dhawaaqay in 30-ka bisha Ramadaan la dhammeeystirayo, ka dib markii la waayay aragtida bisha Shawaal, isla markaana Ciidul fitriga ay kow noqoneyso maalinta berri oo khamiis ah.